Obodo iri na Europe nwere ndu kachasi elu | Akụkọ Njem
The 10 obodo na Europe na ndị kasị mma ndụ
Carmen Guillen | | Obodo, Copenhague, Getaways Europe, Hamburg, Malaga, Munich, Oslo, Zurich
You maara nke bụ 10 obodo na Europe na kasị mma ndụ? Ì chere na obodo Spanish dị n'etiti ha? Kedu obodo ndị ị kwenyesiri ike na 100% ga-adị na ndepụta a? Ọ bụrụ na ịnweghị azịza nye ajụjụ ndị a niile, ebe a ka anyị na-enye ha ... Chọpụta ihe ndị ahụ bụ ezigbo obodo na Europe ọ bụghị naanị ileta kamakwa ịnọ ...
1 Ọnọdụ # 1: Oslo, na Norway
2 Ọnọdụ # 2: Zurich (Switzerland)
3 Ọnọdụ # 3: Aalborg (Denmark)
4 Nke 4: Vilnius (Lithuania)
5 Nke 5: Belfast (Northern Ireland)
6 Nke 6: Hamburg (Germany)
7 Ọnọdụ # 7: Rostock (Germany)
8 Nke 8: Copenhagen (Denmark)
9 Ọnọdụ n 9: Malaga (Spain)
10 Ebe nke iri: Munich (Germany)
Ọnọdụ # 1: Oslo, na Norway
Na naanị Ndi bi na 647.676, Oslo na Norway, a họọrọ # 1 na nke a ogo nke European obodo ebe ibi kacha mma.
Ọ bụrụ na Norway kwụpụta na ihe, n'ihi ya kwa obodo Oslo, ọ bụ maka ịmalite otu n'ime usoro mmụta kachasị mma n'ụwa.
Dị ka eziokwu dị omimi banyere Oslo bụ na o nwere ọtụtụ nkwekọrịta ejima na obodo dị iche iche na Europe, gụnyere ndị Spanish abụọ: Alfaz del Pi (Alicante) na Mazarrón (Murcia).
Ọnọdụ # 2: Zurich (Switzerland)
Ọ bụrụ na anyị maara otu ihe gbasara obodo Zurich, ọ bụ na ọ bụ ebe ego na njikwa akụ na ụba nke Switzerland niile. Ya mere, anyi chere na otutu ihe kpatara ya bu ezigbo obodo ibi na ya bu ezi oru aku na uba ya ... Ihe ozo kpatara oganihu aku na uba Zurich bu ubi nke nyocha na mmuta si n'obodo. Na Polylọ akwụkwọ Federal Polytechnic nke Zurich (ETH) na-eduga na akụkụ a na Mahadum Zurich. Obodo ọzọ nwere ezigbo usoro agụmakwụkwọ hibere, yabụ ...
Ezi agwa bụ ihe nzuzo nye ihe niile? M nzọ gị na-eme!
Ọnọdụ # 3: Aalborg (Denmark)
Aalborg bụ obodo nke anọ kachasị na Denmark, mgbe Copenhagen, Aarhus na Odense gasịrị. Ọ bụ obodo nwere ọdụ ụgbọ mmiri, yana ya na isi ọdụ ụgbọ elu Danish. Ọ bụkwa oche nke bishọp Lutheran.
N'agbanyeghị na ọ bụ obodo nke anọ kachasị na Denmark, ọ nweghị ọnụ ọgụgụ buru oke ibu, ebe ọ karịrị ndị bi na 4.
Akaụntụ soro ulo oru 9.200 were ihe dika mmadu 109.000, ihe karịrị ọkara nke ndị bi na ya. Ọ na-esikwa na ụlọ ọrụ na mbupụ ọka, simenti na mmanya.
Otu n'ime ndị ọzọ ama ama bụ Ememe ya. nke a na-eme n'etiti May 27 na 28. Ọ dị gburugburu ụbọchị ndị a na Aalborg na-anata ihe karịrị mmadụ 20.000 ndị na-aga obodo ahụ iji nwee ọniụ ahụ.
Nke 4: Vilnius (Lithuania)
Anyị abịarute obere obodo a ma ama. Vilna bụ bu isi obodo na obodo kachasị nwee Lithuania. Ihe karịrị ndị bi na 554.000 na-ebikọ ọnụ na mpaghara obodo ya, yana ihe karịrị 838.000 na-agụta ndị bi na mpaghara.
Vilnius bụ obodo ọhụụ ugbu a. Ọ bụ ugbu a mgbe a na-emepe mpaghara azụmahịa na ego na ụlọ ọrụ ọhụụ ya, ọkachasị na mpaghara ugwu nke Osimiri Neris, nke na-achọ ịghọ isi nchịkwa na azụmahịa nke obodo ahụ.
Ihe dị ịtụnanya banyere obodo a bụ na ị na-ele ya anya ebe ọ bụla ị na-ele ya, ị na-ahụ agba dị egwu nke ụba ahịhịa: jupụtara n'ogige ntụrụndụ, ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, wdg.
Ma dị ka onye ikpeazụ ịmata eziokwu, obodo Vilnius nwere kasị internet ọsọ na Europe. Ọnweghị ihe ọ bụla!
Nke 5: Belfast (Northern Ireland)
Okwu "Belfast" N'aka "Aja aja na-agba agba n’elu ọnụ mmiri ahụ. Ọ bụ isi obodo na obodo kachasị ukwuu na Northern Ireland, dịka o nwere bi na ihe karịrị 276.000 bi na mpaghara obodo ya na ndị ọzọ nke Ndị 579.000 nọ na mpaghara obodo ya.
Fọdụ n'ime ebe nkiri ya bụ: warlọ Nzukọ Edwardian Belfast; ihe Sterlọ akụ Ulster, nke e wuru na 1860; ihe Mahadum Queens na Linenhall Library, ndị nke Victorian na Halllọ Nzukọ Mmiri, a magburu onwe ụlọ na oge a na akara.
Nke 6: Hamburg (Germany)
Ọ dịkarịa ala otu obodo German enweghị ike na-efu na ndepụta a ... Ma echegbula, mmadụ abụọ ọzọ na-abịa na-esote.
Hamburg bụ obodo nke abụọ kachasị na Berlin. O nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị bi 2.000.000 n’obodo ya na ihe karịrị mmadụ 4.000.000 nọ n’obodo ukwu ya.
Ihe dị ịtụnanya banyere Hamburg bụ nke ya ihe owuwu, ebe ọ bụ na ọ gụnyere ụdị ụlọ dị iche iche. You nwere ike ịga:
Tlọ ihe nkiri Thalia na Kampnagel.
Chọọchị San Nicolás.
Chọọchị Santa Katalina.
Halllọ Nzukọ nke Elbe Philharmonic.
Na ogige ntụrụndụ ya niile: Adlọ Stadtpark, Ohlsdorf Ili ozu na Osisi un Blomen. na Adlọ Stadtpark, "Central Park", wdg.
Ọnọdụ # 7: Rostock (Germany)
Obodo dị n'ụsọ Oké Osimiri Baltic, n'ọnụ ọnụ Osimiri Warnow. Ọ bụ obere obodo ebe ọ bụ na o nweghị ihe karịrị narị puku abụọ na puku iri ise.
Ihe ịkọwapụta banyere obodo German a bụ na ọ ka nwere akụkụ nke mgbidi na ụlọ elu ndị e wuru n'oge ochie.
Nke 8: Copenhagen (Denmark)
A nnọọ ochie obodo na ụbọchị laghachi afọ 800. Ọ bụrụ na Copenhagen pụta ìhè na ihe, ọ bụ ya dum na ọdịbendị dịgasị iche iche (egwu, ihe nkiri, opera) na na ya mara mma green ebe. Ogige ntụrụndụ abụọ kachasị na Copenhagen bụ Valbyparken na Fælledparken, mana Kongens Have nwekwara nnukwu ewu ewu, na-esote Rosenborg Castle na etiti Copenhagen.
Offọdụ n'ime ya ebe mmasị bụ:
Ọwa nwere Nyhavn.
Alilọ Amalienborg, obibi nke Royal Family.
Tivoli, otu n'ime ogige ntụrụndụ kacha ochie n'ụwa.
mba museet, ihe ngosi nka nke mba.
Konglọ ihe nkiri Kongelige, ihe nkiri Royal.
Katidral nke San Óscar, nke ofufe Katọlik.
Emepere Opera Copenhagen na 2005.
Frederiks Kirke, Chọọchị Federico, a na-akpọ bleka Marble.
Kongens Nytorv, Plaza del Rey ọhụrụ, nke nwere skating rink rink n'oge oyi.
Ma ọ bụ Little Mermaid nke Copenhagen, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọnọdụ n 9: Malaga (Spain)
Eziokwu bụ na na mba anyị anyị nwere ike ịchọta obodo ndị nwere ezigbo ndụ ma nsogbu ugbu a anaghị enyere aka. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere obi ụtọ ịhụ Malaga na ndepụta a.
Ọ bụrụ n'ịga Malaga, ikwesighi ịhapụ:
Katidral nke anụ ahụ.
El ọdụ ụgbọ mmiri.
Ogige Botanical na Picasso Museum.
Theaterlọ ihe nkiri Rom ya na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ụgbọala.
na Malagueta na Misericordia osimiri.
Plaza de la Constitución na ebe akụkọ ihe mere eme ya.
Contlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịmma Contemporary na Gibralfaro Castle.
Chka ụka nke San Pedro na nke dị nsọ.
Plaza de la Merced na Malaga Park ma ọ bụ Alameda.
Echelọ ihe nkiri Echegaray na veranda Goya.
Obodo Mijas, Fuengirola, Ronda, Antequera, Júzcar, Marbella na Frigiliana.
El Palo, Los Álamos na Puerto Banús osimiri.
Ọgba ndị Nerja.
Ebe nke iri: Munich (Germany)
Maka nke ya nhicha, nke ya akụ na ụba na n'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọdịbendị na ememe, Munich ka a họọrọ # 10 na ndepụta a.
Ikwenyere n’obodo ndị mejupụtara ndepụta a? Na-atụ uche ọ bụla? Dɛn nti na wamfa ne ho annye mu? Anyị ga-achọ ịma echiche gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Copenhague » The 10 obodo na Europe na ndị kasị mma ndụ
Ihe ncheta 20 World Heritage na Spain (II)